GPS on Android, SuperSurv waa bedel weyn GIS - Geofumadas
GPS ee Android, SuperSurv waa GIS kale weyn
Abriil, 2013 GPS / Qalabka, aragti ugu horeysay, SuperGIS
SuperSurv waa qalab loogu talagalay gaar ahaan GPS-ga Android, sida codsi udub dhexaad u ah farsamooyinka GIS kuwaasi oo aad ku qabsan karto xogta si karti iyo dhaqaale.
Nidaamka ugu dambeeya ee SuperSurv 3 wuxuu u wareegayaa ururiyaha, iyada oo lala socdo geolocation, khariideynta, khariidadda, cabbiraadda iyo wadada socodka.
Waa wax xiiso leh in xogta lagu keydin karo qaab feyl ahaan ah (SHP) iyo GEO, oo ah qaab lahaansho Supergeo; waxaan ka hadalnay maalmo ka hor. Hawlaha GPS waxaad ku badbaadin kartaa jidadka.
Maxaad ku samayn kartaa SuperSurv 3
Uruurinta xogta si deg deg ah marka la eego qaababka, xariijinta iyo qaababka isweydaarsiga
Muuji xogta xaddidan ee nidaamka isuduwidda caalamiga ah
Samee oo maamul mooyee
Helitaanka xogta laga helo SuperGIS Server
La tashiga iyo qiyaasaha khariidadaha isticmaalaya qalabyada GIS
Eeg meelaha iyo tilmaamaha waqtiga dhabta ah
Isticmaal khariidada foomka la ciribtiray, shp, GEO iyo macluumaadka cached ee faylka kordhinta sgt
Isticmaal xaqiiqooyinka la filan si aad u muujiso Muujinta Jidadka
Ka faa'iideysiga qaababka GPS ee ku saabsan Android
Isticmaalka SuperSurv 3
Farsamo yaqaannada goobta, labadaba ujeeddooyinka cadastre iyo cilmiga deegaanka, waxay ka faa'iideysan karaan qabashada macluumaadka iyaga oo adeegsanaya GPS ama ku soo jiidan kara shaashadda bilaashka ah. Waad dami kartaa, daaran kartaa oo aad dooran kartaa lakabyada si aad u doorato halka ay ku kaydinayso xogta. Si loo fududeeyo uruurinta xogta, waxaa xiiso leh in lakab kasta uu yeelan karo miis leh astaamo lagu waafajin karo qoraalka, tirooyinka, taariikhda, waqtiga, iskuduwaha, iwm… qaabab iyo iyadoon wax badan loo rogin.
Waxay taageertaa iskuduwaha caalamiga ah qaab juquraafi ahaan. Hantida E-compass waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku aragto khariidadda khariidadda; si isticmaaleyaashu u arki karaan guryaha hadda ku jira barta xaaladda isla markaana ay ula socdaan wadada ay soo mareen.
Intaa waxaa dheer, hawlgalka kamarad ah ee moobilka, wuxuu noqon karaa casriga ama kiniin, waxaa lagu keydin karaa foomka geo-referenced.
Bandhigga xogta maahan oo keliya qaababka vector iyo raster, laakiin sidoo kale adeegyada loo maro adeegyada khariiddada websaydhka. Kala beddelka xogta hal adeeg iyo kuwa kale ... waa mid horumarsan marka la eego shaqeynta iyo wax ku oolnimada.
Ugu dambayntiina, si khaldan loo maareyn karo, waxaa xiiso leh in marka la abuurayo mashruuc cusub ay adeegsato astaamaha kii ugu dambeeyay ee loo adeegsaday inuu ku sii socdo isla deegaanka iyadoo aan loo baahnayn in wax walba dib loo habeeyo. Muuqaal kale oo wax ku ool ah oo wax ku ool ah waa maaraynta lakabyada, oo lagu dhajin karo nidaam kala duwan, ikhtiyaar hufnaan oo hubineysa inaad arki karto wax ka badan hal lakab isla waqtigaas.
Gaaban, ugu fiican ee GPS ee Android.
Waa imisa qiimaheeda SuperSurv?
Caadi ahaan waxay ku socotaa 200 Dollar liisanka, ee suuqa Soomaliga ee ku hadla ZatocaConnect ayaa ku siin kara qiimo jaban.
Codso qadar qiimo leh
Post Previous" Hore Shirkadda Sirdoonka ee Shirka Brazil, ayaa la dalbadaa
Post Next Sida loo xariiro internetka meelo fogNext »
3 Jawaabo "GPS on Android, SuperSurv waa bedel weyn GIS"
Waxaa jira isku xirka software download gis
seba isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u arkaa inay aad u xiiseyneyso, laakiin ma aan ka soo qaadan karin goobta supergeo. waa meel kale ????
fabian yanez isagu wuxuu leeyahay:
fadlan bixi faahfaahin aad u xiiso ii soo dir macluumaad dheeraad ah